सिद्धान्त प्रचारमा किन कञ्जुस्याइँ ? - Online Majdoor
सिद्धान्त प्रचारमा किन कञ्जुस्याइँ ?
नेकपाले समाजवादी सिद्धान्त र विचार अँगालेको भए सोही पार्टीका नेता घनश्याम भुषालले नेकपा समाजवादी बाटोमा कि पुँजीवादी दलालको बाटोमा भनी पार्टीकै शीर्ष नेताहरूसामु औँला ठड्याएर प्रश्न गर्नुपर्ने होइन । कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचार थन्काएर पुँजीवादी राजनीति गर्ने दललाई पुँजीवादी पार्टी भन्यो भनेर नेकपाले चित्त दुखाएर हुन्छ ? झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त भएको सरकारको नेकपाको खाका खोइ ? कम्युनिस्टको सरकार बनेपछि मौलिक परिवर्तन के भएको छ ? राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना भएकोमा मात्र के गर्व गरेर हुन्छ ? राजतन्त्रको अन्त्य कुनै एउटा दल विशेषले भएको पनि होइन । राजतन्त्रको अन्त्य देशका विभिन्न वामपन्थी दल र नेका मिलेर भएको हो । यसमा कुनै एउटा दलले गरेको भन्ठानु गलत हुनेछ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र विचार जनतासमक्ष पु¥याउन कुनै अवसर पर्खनु पर्दैन । कम्युनिस्टको विचार जनताको घर आँगनमा पु¥याउन कुनै कम्युनिस्ट नेताहरूको जन्म दिनलाई पर्खेर बस्नुपर्दैन । एमाले र एमाओवादी मिलेर बनेको नेकपाले निर्वाचनको बेला कहिल्यै पनि कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचार प्रचार गरेन । नेकपाको कुनै पनि साना ठूला खुला सभा, भेलामा नेताहरूले कहिल्यै पनि कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचार या समाजवादी व्यवस्थाको आवश्यकता र महत्वबारे बताएनन् । पुँजीवाद र समाजवादको भेदबारे जनतालाई सुसूचित पार्ने काम गरेनन् । कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै भूमिका निर्वाह नगर्ने पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी किन भन्ने ? कम्युनिस्ट भनिने पूर्वएमाले र एमाओवादीले जसरी भए पनि निर्वाचन जित्ने, दल ठूलो बनाउने र सरकारको नेतृत्व गर्ने कुराबाहेक अरु उठाएनन् या उठाउन चाहेनन् ।
नेकपा विश्वासघाती पार्टी हो । सिद्धान्त र विचार बन्धक राखेर राजनीति गर्ने नेकपाले कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढाउने छाँटकाँट देखिँदैन । ठूला र शक्तिशाली दलको मातमा चढेर सरकारको नेतृत्व गरेर राजस्वमा दाइँ गरिराख्नु नै नेकपाको चरित्र भएको छ । देश र जनताभन्दा दललाई नै ठूलो र प्यारो सम्झेर सरकारको नेतृत्व गरिरहने नेकपाको ध्येय रहेको छ । यसले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी बलियो हुने छैन, कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल हुने छैन ।